टेलिकमका ग्राहकलाई सेयर दिन आवश्यक गृहकार्य शुरू, क-कसले दिन पाउँछन् आवेदन ? – Samriddhakhabar
July 21, 2021 July 21, 2021 खबर समृद्धLeaveaComment on टेलिकमका ग्राहकलाई सेयर दिन आवश्यक गृहकार्य शुरू, क-कसले दिन पाउँछन् आवेदन ?
काठमाडौं – सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत नेपाल टेलिकमको ल्यान्डलाइन, मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा उपभोग गर्ने ग्राहकलाई कम्पनीको २२ प्रतिशत सेयर बिक्री गर्ने घोषणा गरेसँगै यसको कार्यान्वयनका लागि गृहकार्य अघि बढाएको छ ।
सेवाग्रहीले सेवा उपयोग गरिदिएर तिरेको पैसाले कम्पनी बनेको र सेवाग्राहीलाई नै स्वामित्व दिने नयाँ मोडल कार्यान्वयनमा लैजानेबारे अर्थले आवश्यक तयारी थालिसकेको छ,’ उनले भने ।
बजेटअनुसार नेपाल टेलिकमको शेयर ग्राहकलाई विक्री गर्नेबारे निजीकरण ऐनको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार क्याबिनेटबाटै यसका कतिपय प्रक्रिया निजीकरण ऐनअनुसार गर्नेगरी निर्णय हुन जरुरी रहेकाले अहिले त्यसबारे गृहकार्य भइरहेको छ ।
मन्त्रीको अध्यक्षमा निजीकरण समिति छ, त्यो समितिमा सम्बद्ध मन्त्रालयका सचिव पनि छन्, निजीकरण ऐनअनुसार प्रक्रिया पुर्‍याएर शेयर जारी गर्न आवश्यक प्रस्ताव तयार गरी क्याबिनेटमा पठाउने तयारीमा अर्थ लागिरहेको छ ।
टेलिकमको शेयर ग्राहकलाई दिनेबारे सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयले पनि समन्वयनको काम गरिरहेको छ । सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव शोभाकान्त पौडेलले कम्पनीको शेयर स्वामित्वबारे निर्णय लिने पूर्ण अधिकार नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समितिलाई रहेको बताउँदै सञ्चार मन्त्रालयले गर्ने समन्वय तथा सहजीकरणको काममा सहयोग गरिरहेको बताएका छन् ।
शेयर विक्रीबारे बजेटले बोलिसकेको छ, यो समयमै कार्यान्वयमा जानेछ । कार्यविधि निर्माणमा सञ्चार मन्त्रालयले गर्ने सहजीकरणमा कुनै कमी हुन दिँदैनौं,’ उनले भने ।
बजेटमा आएको कार्यक्रमलाई सफल पार्न नेपाल टेलिकमले पनि आवश्यक तयारी अघि बढाइसकेको छ । टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले शेयरविक्री सम्बन्धी अर्थदमन्त्रालयबाट खाका आएपछि नेपाल टेलिकमको बोर्डबाट त्यससम्बन्धी निर्णय हुने बताए ।
उनका अनुसार बजेटमा शेयर विक्री गर्ने कार्यक्रम आएपछि टेलिकमले हाल रहेका ग्राहकको विवरणलाई अद्यावधिक गर्न ‘केवाईसी’ राख्ने कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाइसकेको छ । ‘अद्यावधिक गर्ने काम लगभग सकिसकेका छौं । यसबारे विवरण सम्बद्ध निकायलाई पठाउँदै छौं,’ अधिकारीले अभियानलाई भने ।
शेयर विक्री गर्न प्रबन्धक नियुक्ति कार्यविधि आएपछि प्रक्रिया शुरू हुने उनको भनाइ रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट माग भएर आएको विवरणलाई समयमै पठाउने तयारीमा आफूहरू जुटिसकेको अधिकारीले बताएका छन् ।
सुनको भाउ आज तोलामा यति धेरैले घट्यो ।
युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सलाई आइपिओ निष्कासन गर्न बोर्डले अनुमति दियो। हेर्नुहोस् कहिले खुल्छ।
मैलुङ्ग खोला जलविद्युतले आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ ! पूरा पढ्नुहोस्।